I-Butterfish, intlanzi eguqukayo ye-gastronomy. | Ngeentlanzi
El ibhotolo Yintlanzi enikezelwa kwimivalo yaseJapan eSpain, zombini zuluhlaza nakwezinye iintlobo ze-niguiri kunye ne-sushi. Yintlanzi esele iyinto eyaziwayo kwi-gastronomy nangona kuthethwa izinto ezininzi ngayo.
Ngaba ibhatiffish ikhona ngokwenene? Qhubeka ufunda kwaye wazi zonke iimfihlelo zayo.
1 Iimpawu kunye nebhayoloji yebhotolo yeentlanzi
2 Ukondla nokuzala
4 I-Butterfish kunye ne-gastronomy
4.2 Cuisine yesiNtu
Iimpawu kunye nebhayoloji yebhotolo yeentlanzi
Ngokuchasene noko abantu abaninzi bacinga, ibhatfishfish ikhona. Kukwaziwa njengegama le butterfish. Yeyentsapho UPholidae (ameva amaza) kunye nokuyifanisa nezinye iintlobo, sinokuthi ziyafana ne-ndeard, viviparous kunye ne-lumpero blenny.
Inobungakanani ngokubanzi phakathi kwe-15 kunye ne-20 cm ubude. Umzimba wayo uphakanyisiwe, ufana nqwa ne-eel kwaye ulungile. Ikwayintlanzi ethe tyaba kwaye ubude bayo obude obungasemva buqala ngasemva kwentloko kwaye bunemitha ethambileyo (yiyo loo nto usapho lubizwa ngokuba yi-tidal spiny).
Kwelinye icala, i-anal fin ifikelela kwinqanaba eliphakathi lomzimba kwaye umsila womsila ujikeleze ngakumbi. Yenye yeentlanzi apho amaphiko angasemva kunye nawempundu ahluke ngokulula. Inamaphiko amancinci e-pelvic. Ngokubhekisele kwintloko, incinci kakhulu kwaye umhlathi wayo osezantsi uphumele ngaphandle. Umlomo uhlelwe phezulu kwaye unamaxolo amancinci ekunzima ukuwaxabisa, kuba agqunyiwe phantsi kwesikhumba sakhe esibhityileyo.
Umbala wayo umdaka kwaye uhlala unamabala atyheli, esenza ipatheni eqhelekileyo (ngokungathi yenziwe ngenjongo). Inophawu olukhethekileyo apho le ntlanzi yaziwa ngokukhawuleza kwaye ilayini emnyama eme nkqo phantsi kweliso. Ukongeza, enye yezona zinto zibalulekileyo kule ntlanzi Ngumqolo ophakathi kwamabala ali-9 ukuya kweli-13 omnyama ngombala ecaleni kwesiseko se-dorsal fin kwaye nganye ijikelezwe yiringi etyheli ekhanyayo. La mabala akhula njengokuba iintlanzi zikhula. Njengomntwana abanazo.
Ezi ntlanzi zitya ukutya okuncinci eziphilayo benthic kunye Roe.
Malunga nokuzala kwakhona, indlela abazala ngayo kuLwandle lweBaltic ayaziwa kakhulu. Izazinzulu zicinga ukuba le ntlanzi izala ngexesha lasebusika kwaye ibeka amaqanda ayo ezantsi kweqokobhe okanye phantsi kwelitye kwindlwana eyakhiwe yindoda. Nje ukuba imazi izale, eyindoda yiyo egcina ikhusela amaqanda kwaye iwenza ioksijini iwenze umsila.
Le ntlanzi ifumaneka kwi amanzi aselunxwemeni eSipoo (empuma yeHelsiki). Sinokufumana ezinye iisampulu ukuya eKaskinen kwiGulf yaseBothnia nakwiiAland Islands.
Indawo yayo ihlala elwandle, nangona ihlala ihleli malunga ne-10 yeemitha ubunzulu. Ukuze iphile kwaye izingele ixhoba layo, ifihla phantsi kwamatye okanye amagqabi emini, kwaye ebusuku iyakhangela ixhoba layo ukuze ilondle.
I-Butterfish kunye ne-gastronomy
I-Butterfish yinto emnandi kukutya kwaseJapan. Nangona ngeSpanish ayisiyi kuqatshelwa. E-Spain sibiza iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zentlanzi, kuba zonke zinohlobo lwenyama ngokufanayo. Inyama yale ntlanzi inayo ukutyeba okunamafutha, okuqinileyo kunye nobuthathaka kwaye yinyama emhlophe. Iyaziwa ngeli gama, ngenxa yeempawu zayo ezibonakalayo ifana nebhotolo.
Emva koko siza kuchaza iindidi ezintathu esizibiza ngokuba yibhatfishfish.
Oku kuya kuba yi-butterfish ye-quintessential. Ngokufanelekileyo, eyantlandlolo. Ikwabizwa ngokuba yi-pámpano okanye iblue butterfish, ngesiNgesi. Kuvela koluhlobo apho igama lakhe liza khona.
Ihalibut Olu hlobo lusetyenziswa kakhulu ekhitshini kwaye lubizwa ngokuba yi-butterfish kwiileta.
Ikhowudi emnyama. Ayinanto yakwenza nekhowudi yemveli esiyaziyo, emhlophe netyuwa, kodwa izalisekisa iimpawu zenyama kunye nokuthungwa okukhankanywe ngaphambili. Le ntlanzi kufuneka ityiwe ngesixa esincinci, kuba ukuba ingaphezulu kwe-170 yeegramu ifakiwe, inokonakalisa isisu.
Ekutyeni kwaseJapan, ibatfishfish isetyenziswa kuzo zonke iileta. Isetyenziswa ekulungiseleleni i-niguiri. Oko kukuthi, iqhekeza le-butterfish lisikwe laza labekwa kwibhola yerayisi.
Le yesiko kwi-gastronomy yaseJapan. Kodwa kukuba kukutya kwaseSpanish, le ntlanzi ikwanayo nendawo. Ngaphandle kweentlanzi ezintathu ezikhankanywe ngaphambili ezaziwa njenge-butterfish, intlanzi yesikolo, iyaziwa ngelo gama. Nangona le ntlanzi ineyantlukwano ngokubhekisele kokuseleyo kwaye oko kukuthi ukwakheka kwayo kutyebile kumanqatha anganyamezelekiyo emzimbeni wethu. Ngaloo ndlela, ukusetyenziswa kwayo kuhlala kuvelisa iingxaki zesisu.
Ngenxa yezi ngxaki ezinokubangela, akukhuthazwa ukuba uyisebenzise iluhlaza le ntlanzi, kodwa kungcono ukuyipheka ngaphambili. Kwimeko apho ityiwa ingaphekwanga, kungcono ukususa ulusu kunye namafutha, kuthintelwe iingxaki ezizayo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele enye yezi ntlanzi njengebhotolo kukutyeba kwayo, okuqinileyo kunye nokuthamba kunye nombala wayo omhlophe. Ezi ntlanzi ziyonwabisa kwaye zihamba neencasa ezinesibindi.
I-Butterfish isetyenziswa kwezinye iiresiphi zemveli eJapan, injani tataki. Le recipe iquka ukubeka isiqwenga seentlanzi epanini kunye nokuzidlulisa ngokufutshane. Ngale ndlela, iintlanzi kufuneka ziphume phantse ziluhlaza. Nje ukuba isuswe epanini, inongwe ityuwa nepepile kwaye idlule kwenye ipani esibeke kuyo ioyile encinci kunye nenye ioyile yesesame. Ke, xa isiqwenga sidlula epanini, iya kuba yigolide ngaphandle. Emva koko, beka i-butterfish kwisitya esinomkhenkce kwaye uyivumele ipholile.
Ukuyisebenzisa, iqhekeza liyasuswa lize lisikwe libe ngamacwecwe amalunga neemilimitha ezimbini ubukhulu (licekeceke kakhulu) kwaye linokudityaniswa nemicu yetheniphu, ispaghetti solwandle okanye irayisi emhlophe.
Njengoko ubona, ibatfishfish inguquko kwi-gastronomy.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi